Unashamed Australia ubakhumbuze — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Unashamed Australia ubakhumbuze
Isibini kwiiveki ezidlulileyo mna edlale ufu- wonda kwelinye icala lehlabathi kunye nabanye abantu bam endizithandayo. Tedashii, Pro, KB, Thi'sl, DJ PDogg, yethu umphathi ukhenketho Steadman, mna zazijongene eOstreliya ukukhonza uYesu.
Sachitha iiveki ezimbini phantsi babedlula yaseBrisbane, Melbourne, Perth, kwaye Sydney. Kwimeko nganye kwezi zixeko babeyinxalenye eekonsathi ezinkulu ukusuka 5,000-10,000 abantu abatsha. Phambi eekonsathi, saya kwezinye izikolo wamema ukubarholela ibonisa. Yintoni savunyelwa ukuba nithi ezininzi kwizikolo lwalulinganiselwe (ngenxa yokuba izikolo zikarhulumente non-lamaKristu), kodwa benza konke okusemandleni ethu ukuze ukukhuthaza abafundi ibalathisele kuKristu.
Ngelo eekonsathi, amahlanu kuthi betha iqonga njengoko benza, yalila unashamed. Siye lanyikima ezo amanqanaba kangangoko sinako ngexesha uzama ukuba icace kangangoko kunokwenzeka malunga iVangeli olusenza ukuba senze ntoni. Kunayo nantoni sasifuna abantu bazi uYesu! Sisoloko sizama ukwenza ukuba abantu bashiye gqitha, kungekhona ubuchule bethu, kodwa iNkosi yethu.
Yintoni na umqobo
Simelwe ukuchitha ixesha kunye amakholwa ukusuka kwelinye ilizwe, kunye nenkcubeko eyahlukileyo, abavela kwiindawo ezahlukeneyo abathanda uYesu efanayo ntoni. Enye uvuyo lokuya kumazwe ezahlukileyo nokukhunjuzwa ngecebo likaThixo “intlawulelo azihlambululele abantu kuzo zonke iintlanga.” UThixo emsebenzini, nje apha, kodwa kulo lonke ihlabathi, ekusindiseni abantu kwaye usebenzisa kubo uzuko lwakhe.
Sifunde ukuba Aussies ukuthetha ezinga. Abayibiza neepepile “buyisela ubhalo oluqhelekileyo” bayibiza engalawulwayo “kwezikhuseli.” Intoni!? Bacinga ukuba uthetha kakhulu nangona… Zonke Dudes zinyikima jeans ezinqinileyo bayaqhuba ezininzi iimoto zancinane. Abanye abafundi bacinga Thi'sl yaba Biggie (abazange bendingazi ukuba ufile!) baze bacinga ukuba Bow Wow (kuba mzuzu yam unebhongo). Ukuze wenze ukuba ukuba ezinye wemikhosi zethu wawunikela ezinye emnandi Aussie BBQ, kwimvana, inkukhu, kwaye nabanye uyikhangaru. Bekumnandi!
This'l odlayo BBQ Kangaroo
Enye yeembalasane ixesha lam eOstreliya busiba ukuba ayikhabe nabazalwana bam. Ubudlelane isisityebi, ubudlelwane zaye nzulu, ndaza lisakheka yi iincoko yobuthixo. Ndikhumbula iincoko ezilungileyo ngomtshato, inkonzo, ngutata, umculo, etc. UThixo usebenzisa iincoko ezifana nezo ku khuthaza nam ngokwemisebenzi ezilungileyo wenze kum njengaye. Ndinombulelo ukuba asebenzisane kudlule Rappers, DJ ngayo, kunye nabaphathi ukhenketho ngubani ngokwenene uYesu.
Ndifuna ukubulela kumasebe abo kwamnceda oko kwenzeka, iinginginya owabonisa ububele obalaseleyo, kunye nabaxhasi abesiza eekonsathi. Kude ibe lilixa elizayo, sinithanda Aussie!